Maalin: Janaayo 8, 2019
TÜLOMSAŞ waxay jabisay wax soo saar cusub gudaha iyo wax soo saarka dalka waxayna soo saartey gaadiidkii gaadiidka dagaalka ee gudaha iyo kuwa qaran. Gawaarida Gawaarida ee laga soo saaray TÜLOMSAŞ waxaa ku jira baabuurta, baabuurta ganacsiga fudud, basaska, [More ...]
Jawaab degdeg ah oo ku socota waddooyinka lugaha leh ee barafka ee Kayseri
Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri ayaa markiiba wax ka qabatay baraf culus. Ka kaxaynta barafka meelo badan, bari ilaa galbeed, koonfur ilaa woqooyi, oo barafku wax ku ool u yahay badhtamaha magaalada iyo degmooyinka [More ...]
IZBAN Weerar Gaar ah, Qulqul-celin Ku noqoshada Jinsiyadaha
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, kadib dhamaadka shaqo joojinta Izmir, ayaa si ku meel gaar ah loo abuuray khadadka basaska iyo minibus ee lagu dhawaaqay berri (9 Janawari Arbacada) waa laga saari doonaa safarka. Basaska ESHOT iyo basaska yar yar, ayaa caadi u ah shaqo joojinta ka hor [More ...]
Ht 65000 Nooca 12 Piece Caf iyo Ht 80000 Nooca 1 Piece Siemens Emu Yht wuxuu dhigayaa 1 Sanadka Wadarta 4680000 Km Waayo Isugeyn 110 Maya Lu Tilmaamid Farsamo. [More ...]
Diiwaan galinta 1 Million 250 Thousand Ton Hot Asphalt ee Diyarbakir
In kasta oo Diyarbak Metror Dawladda Hoose ee Magaalada ay jabisay rikoor iyada oo dhigaysa 1 milyan 250 kun oo tan oo raf ah oo kulul dusha sare ee degmooyinka Sur, Kayapınar, Yenişehir iyo Bağlar, 13 ayaa daboolay wadooyinka xaafadaha miyiga ee xNUMX kun oo km oogada sare ah. [More ...]
Diyarkart'an 1 milyan ayaa horay looga iibiyay si loogu siiyo muwaadiniinta lacag la’aan ah muwaadiniinta Degmooyinka Magaalada Diyarbakir, 10 kun oo mitir oo laba jibbaaran oo ku taal agagaarka Beerta Tababarka Gaadiidka ayaa la dhameystiray oo la furay, inbadan [More ...]
Magaca ugu muhiimsan ee Gaziantep
Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin ayaa sheegtey in mawduuca ugu muhiimsan markan yahay gaadiid, adkeynta muhiimadda ay leedahay in lagu qalabeeyo magaalada tikniyoolajiyad si xawli ku dheehan tahay. Gudoomiye Kaahin, Idaacadda tooska ah ee Joint Broadcasting Platform [More ...]
Injiilka Gaadiidka laga bilaabo Sahin ilaa Samsun!
Duqa magaalada Zihni Sahin, iyadoo dawlada hoose ee metelaysa dhammaan Samsun, aragtida gaadiidka laxiriirta, soojeedinta iyo cabashooyinka loo gudbin karo 'Xarunta Wicitaanka Gaadiidka' ayaa ku dhawaaqday in la asaasay. Degmooyinka Waaweyn, Samsun ka raaxo badan oo gaadiid ka sahlan [More ...]
Qalabaynta Dadka Dhaadheer ee Cusub ayaa lagu bedelayaa Konya
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay dib u cusbooneysiineysaa marinnada dadka lugeynaya ee dhameystira noloshooda dhaqaale meelo kala duwan oo magaalada ah. Halkii ay ka gudbi lahaayeen lugaynayayaasha lugaynaya Wadada Istaanbuul iyo Beysehir Road oo dumintiisu ay dhammaystirtay, ka baxsad, kululaynta hoose. [More ...]
Gaadiidka Umuttepe waa Amniga iyo Kooxaha Barafka ee Kocaeli
Kooxaha barafka ee Magaalada Kocaeli ee Magaalada Barakeysan ayaa sugaya qaarada inay wadooyinka u furnaato oo ay meesha ka saarto dhibaatooyinka suurta galka ah ee barafka kaasoo muujinaya saameynta magaalada ee qeybaha sare. Adigoo ka jawaabaya baraf si dhakhso leh [More ...]
La dagaallanka barafka ee Bursa
Qeybta Gawaarida Degmooyinka Magaalada Bursa ee Gawaarida Gaadiidka, degmada 17 ee baaxadda leh dadaallada la dagaallanka barafka si loo furo wadada xaafadaha 106 ee xiran habeenkii, wali waxaa jira waddo xiran xaafad. Waaxda Gaadiidka [More ...]
10 Diseembar 2018 shaqo joojinta ayaa ka bilaabatay goobaha shaqada ee xiriirka la leh İZBAN A.Ş. Sida ku xusan go’aanka lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah ee uu la saxeexan yahay Madaxweyne Recep Tayyip Erdo ,an, “İzmir [More ...]